စကု လေကြောင်းလိုင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
စကု လေကြောင်းလိုင်းသည် စင်ကာပူ လေကြောင်းလိုင်း၏ တန်ဖိုးနည်း နှင့် ခရီးရှည် သွားလာသည့် လေကြောင်းလိုင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။
TZ SCO SCOOTER
၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၁ (၂၀၁၁-၁၁-၀၁)
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံ အခြေစိုက် တန်ဖိုးနည်းနှင့် ခရီးရှည် ပျံသန်းမည့် လေကြောင်းလိုင်း တစ်ခုအဖြစ် ဩစတေးလျ နိုင်ငံ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ကို ပျံသန်းရန် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ စင်ကာပူ လေကြောင်းလိုင်း၏ လေကြောင်းလိုင်းအခွဲ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆစ်အဲ လေကြောင်းလိုင်းမှာ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများသို့ ပျံသန်းရန် ဖြစ်ပြီး တိုက်ဂါး လေကြောင်းလိုင်းမှာ တန်ဖိုးနည်း လေကြောင်းလိုင်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အစပိုင်းတွင် စင်ကာပူ လေကြောင်းလိုင်းမှ ဘိုရင်း ၇၇၇ တစ်စီး လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဘိုရင်း ၇၈၇ ဖြင့် လဲလှယ်ခဲ့သည်။ ရုံးချုပ်မှာစင်ကာပူ ချန်ဂီလေဆိပ် တွင် တည်ရှိသည်။
၃ မိတ်ဖက် လေကြောင်းလိုင်းများ
၂၀၁၁ ခုနှစ် မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် စင်ကာပူ လေကြောင်းလိုင်းသည် တန်ဖိုးနည်း နှင့် ခရီးရှည် ပျံသန်းမည့် လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခု တိုးချဲ့ရန် ကြော်ငြာခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ၁ ရက်နေ့တွင် အဆိုပါ လေကြောင်းလိုင်း အမည်သည် "စကု" ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၎င်းတို့၏ လေကြောင်းကုတ်နံပါတ် ကို "OQ" မှ "TZ" သို့ပြောင်းလဲကြောင်း ကြော်ငြာခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ဩစတေးလျ နိုင်ငံ ဆစ်ဒနီ လေဆိပ် သို့ ပထမဆုံး လေယာဉ် စတင်ပျံသန်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ဩစတေးလျနိုင်ငံသို့ ဒုတိယ ခရီးစဉ်အဖြစ် ဂိုးကို့စ် သို့ ပျံသန်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် မိခင် စင်ကာပူ လေကြောင်းလိုင်းမှ ဘိုရင်း ၇၈၇-၉ ဒရင်းလိုင်နာ လေယာဉ်များကို လွှဲပြောင်းလက်ခံခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် စကု လေကြောင်းလိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ လေယာဉ်အင်အား တိုးချဲ့မှုအစီအစဉ်အဖြစ် ပဉ္စမမြောက် ဘိုရင်း ၇၇၇-၂၀၀ က မေလကုန်တွင် လက်ခံရယူမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ခရီးစဉ် ၂ ခု သို့မဟုတ် ၃ ခု ပိုမိုပျံသန်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာခဲ့သည်။ လေယာဉ်တွင်း ဖျော်ဖြေရေးအဖြစ် ခကူးတီဗီ အစီအစဉ်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် စင်ကာပူ - ထိုင်ဝမ် - ဆိုးလ် ခရီးစဉ်ကို တစ်ပတ်လျှင် ၃ ကြိမ် ပျံသန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာခဲ့သည်။ အဆိုပါ ခရီးစဉ်သည် စင်ကာပူ - ဆိုးလ် အကြား ပထမဆုံး တန်ဖိုးနည်း လေကြောင်းလိုင်း ပျံသန်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် စင်ကာပူ - ထိုင်ဝမ် - ဆိုးလ် ခရီးဏည် စတင်ပျံသန်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် စင်ကာပူ - ဟောင်ကောင် ခရီးစဉ်ကို တစ်ပတ်လျှင် ၅ ကြိမ် ပျံသန်းခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာတွင် ဩစတေးလျ ပတ်ခ် မြို့ ခရီးစဉ် စတင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့မှစ၍ ဆစ်ဒနီ၊ ပတ်ခ်၊ ဟောင်ကောင် ခရီးစဉ်များကိုလည်းကောင်း၊ ဧပြီလကုန်တွင် ဘန်ကောက်၊ ဂိုးကို့စ် ခရီးစဉ်များကိုလည်းကောင်း ဘိုရင်း ၇၈၇-၉ များဖြင့် ပျံသန်းမည် ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာတွင် ကြော်ငြာခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့တွင် စင်ကာပူ - မဲလ်ဘုန်း ခရီးစဉ်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဘိုရင်း ၇၈၇ လေယာဉ် အသုံးပြု၍ ပျံသန်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် လေကြောင်းလိုင်း ဖြစ်သော နော့ လေကြောင်းလိုင်း နှင့် ပူးပေါင်းကာ နော့စကု လေကြောင်းလိုင်းအဖြစ် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ နော့စကု လေကြောင်းလိုင်းကို နော့ လေကြောင်းလိုင်းမှ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်ဆိုင်ပြီး စကု လေကြောင်းလိုင်းမှ ၄၉ ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်ဆိုင်သည်။
စကု လေကြောင်းလိုင်း၏ ပထမဆုံး ဘိုရင်း ၇၈၇-၉ လေယာဉ် စင်ကာပူနိုင်ငံ ချန်ဂီလေဆိပ်သို့ ပထမဆုံး ပို့ဆောင် ဆင်းသက်စဉ်
စကု လေကြောင်းလိုင်း၏ ရုံးချုပ်သည် စင်ကာပူ ချန်ဂီလေဆိပ်၏ လေဆိပ်အဆောက်အဦး (၁) တွင် တည်ရှိသည်။
လေယာဉ်များကို အဝါရောင် နှင့် အဖြူရောင် ကို အသုံးပြုကာ ဆေးရောင်ခြယ်ထားသည်။ ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့မှ စ၍ လေယာဉ်မောင်မယ်များ၏ တူညီဝတ်ဆုံကို အနက် နှင့် အဝါရောင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
နော့စကု လေကြောင်းလိုင်းသည် ဘန်ကောက်မြို့ အခြေစိုက်ဖြစ်ပြီး၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် နော့ လေကြောင်းလိုင်း နှင့် စကု လေကြောင်းလိုင်း တို့ ပူးပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ ဒွန်မောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် အခြေစိုက်သည်။
Amritsar အိန္ဒိယ ATQ VIAR Sri Guru Ram Dass Jee International Airport 
ဘန်ကောက် ထိုင်း DMK VTBD ဒွန်မောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် 
ချန်နိုင်း အိန္ဒိယ MAA VOMM ချန်နိုင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် 
တလျန်မြို့ တရုတ် DLC ZYTL Dalian Zhoushuizi International Airport begins 30 October 2016 
ဂိုးလ်ကို့စ် ဩစတြေးလျ OOL YBCG ဂိုးလ်ကို့စ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် 
ကွမ်ကျိုး တရုတ် CAN ZGGG Guangzhou Baiyun International Airport 
ဟန်ကျိုး တရုတ် HGH ZSHC Hangzhou Xiaoshan International Airport 
ဟောင်ကောင် တရုတ် HKG VHHH ဟောင်ကောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် 
Jaipur အိန္ဒိယ JAI VIJP Jaipur International Airport begins2October 2016 
Jeddah ဆော်ဒီအာရေဗျ JED OEJN King Abdulaziz International Airport 
ကောင်းရှုံ ထိုင်ဝမ် KHH RCKH ကောင်းရှုံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် 
မဲလ်ဘုန်း ဩစတြေးလျ MEL YMML မဲလ်ဘုန်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် 
နန်ကျင်း တရုတ် NKG ZSNJ Nanjing Lukou International Airport 
အိုဆာကာ ဂျပန် KIX RJBB Kansai International Airport 
ပါ့သ် ဩစတြေးလျ PER YPPH Perth Airport 
Qingdao တရုတ် TAO ZSQD Qingdao Liuting International Airport 
Sapporo ဂျပန် CTS RJCC New Chitose Airport begins 1 October 2016 
ဆိုးလ် တောင်ကိုရီးယား ICN RKSI အင်ချွန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် 
Shenyang တရုတ် SHE ZYTX Shenyang Taoxian International Airport 
စင်ကာပူ စင်ကာပူ SIN WSSS စင်ကာပူ ချန်ဂီလေဆိပ် တမ်းပလိတ်:Airline hub 
ဆစ်ဒနီ ဩစတြေးလျ SYD YSSY Sydney Airport 
ထိုင်ပေ ထိုင်ဝမ် TPE RCTP ထိုင်ဝမ် ထောင်ယွမ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် 
ထျန်းကျင်း တရုတ် TSN ZBTJ Tianjin Binhai International Airport 
တိုကျို ဂျပန် NRT RJAA နာရိတ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် 
စကုလေကြောင်းလိုင်း၏ ဘိုရင်း ၇၈၇-၉ ဆစ်ဒနီ လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာစဉ် (ဇူလိုင် ၂၀၁၅)
Boeing 777-200ER ၂
Being replaced by Boeing 787 Dreamliner
Boeing 787–8 ၅
Boeing 787–9 ၆
↑ "Change in IATA Designator Code from OQ to TZ"။ Scoot (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ 21 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "SIA ESTABLISHES HOLDING COMPANY FOR SCOOT AND TIGER AIRWAYS" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ 18 May 2016။ 19 September 2016 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 May 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Singapore Air Operators။ CAAS။
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ "Scoot Launches India Service from late-May 2016"၊ airlineroute။
↑ "Scoot Moves Singapore - Bangkok Service to Bangkok Don Mueang from Sept 2014"၊ Airline Route၊ 16 July 2014။ 16 July 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Scoot Adds Dalian Service; NE China W16 Changes။ routesonline။ 19 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Scoot Launches the Only Direct Flights between Singapore and Gold Coast"။ Scoot (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ 12 June 2012။ 16 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Scoot tiger air jointly operate Guangzou services"၊ Asia one။
↑ "Joint Media Release: Scoot to Take Over Hangzhou Services from SilkAir"။ Silk Air (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။2August 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Scoot to Launch Low Cost Flights Between Singapore and Hong Kong"။ Scoot (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ 27 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Scoot to fly Saudi Arabia"၊ Straits times။
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ Scoot to Start Osaka Service from July 2015။ Airlineroute.net (21 May 2015)။
↑ Scoot to launch Melbourne-Singapore Boeing 787 flights။
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ ၁၅.၂ Schedule of Scoot။ Scoot။
↑ ၁၆.၀ ၁၆.၁ "Eat, Drink and Be Merry - Scoot Shenyang and Qingdao"။ Scoot (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ 30 August 2012။ 16 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၇.၀ ၁၇.၁ Scoot Adds Sapporo Service from Oct 2016။ airlineroute။
↑ "PR53 - Annyeong Haseyo"၊ Scoot။
↑ "Hello Sydney! Scoot Gets Outta Here Tonight!"။ Scoot (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။4June 2012။ 16 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Surprise! Scoot to Launch Singapore-Taipei Route ahead of Schedule"။ Scoot (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။9July 2012။ 16 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Scoot to fly to Tianjin service"၊ Asia one။ 21 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 26 August 2014။
↑ "Scoot to Tokyo & Taipei Every Day from Today"။ Scoot (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ 15 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၃.၀ ၂၃.၁ Boeing 787 Orders and Deliveries (updated monthly).
↑ ၂၄.၀ ၂၄.၁ "Scoot begins new chapter as Singapore Airlines long-haul LCC subsidiary takes first 787"၊ Centre for Avaiation။
↑ Singapore Airlines Annual Report FY2013/14 Archived 14 July 2014 at the Wayback Machine. (PDF).
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စကု_လေကြောင်းလိုင်း&oldid=623519" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၂:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၂:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။